Khamriga iyo CBD - 4 Sababood oo loogu beddelayo aalkolada saliidda CBD • Dawooyinka Inc.eu
Iyada oo dhammaan ciidaha bilahaas, khamrigu hubaal wuu qulqulayaa meel kasta oo aad joogto. Waxaan ku raaxeysanaa cabitaan khamri ah oo wanaagsan halkan iyo halkaasba si ay nooga caawiso nasashada oo xoogaa aan u sii daayo. Si kastaba ha noqotee, tani waxay dhibaato ku noqon kartaa caafimaadkeena markay dhacdo marar badan.
1 1. Saliida CBD way kuufiican tahay
2 2. Aalkolada iyo saliida CBD waxay yareeyaan welwelka bulshada
3 3. Saliida CBD waxay kaa caawin kartaa inaad ka hortagto kororka miisaanka
4 4. Saliida CBD kuuma siineyso wax hangool ah
Galaas khamri ah habeen kasta uma muuqan karo waxyeello, laakiin waxay saameyn ku yeelan kartaa caafimaadkaaga heerar kala duwan, oo ay ku jiraan carqaladeynta qaababka hurdada iyo dheefshiidka saxda ah. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee ay iska shabahaan iyo waxa ka dhexeeya khamriga en CBD?
Maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonnaa sababaha ugu muhiimsan ee aad u rabto inaad ugu beddesho aalkolada saliidda CBD. Waxaan si buuxda u aaminsanahay wax kasta oo dhexdhexaad ah taasna runtii way ku jiri kartaa aalkolo, laakiin maxaa diidaya inaad raadsato xulashooyin kale oo xitaa hagaajin kara caafimaadkaaga? Taasi waa sababta aan runtii u jecelnahay saliidda CBD maadaama ay saameyn la mid ah khamriga ku yeelan karto iyada oo aan saameyn xun ku yeelan oo xitaa kaa dhigno inaad ka roon tahay sidii hore.
1. Saliida CBD way kuufiican tahay
Haa, waan ognahay, hal koob oo khamri casaan ah inuu caafimaad kuu ahaado adiga sababtoo ah antioxidants-ka uu ka kooban yahay. Taasi waxay tiri, tani run maahan inta badan noocyada kale ee khamriga. Xaqsoor ahaan, dadka badankood kama istaagi doonaan hal galaas fasaxa, marka waa inaan xisaabta ku darsanaa sidoo kale. Runtii way fududaan kartaa in lagaa qaado markii aad bilowdo inaad dareento guuxaas wanaagsan iyo bareegyada oo dhami daaqadda ka baxaan.
Si kastaba ha noqotee, saliida CBD waxay sidoo kale noqon kartaa antioxidant awood badan oo kaa caawin kara inaad nasato, oo la mid ah saameynta khamriga, iyadoon cilladaha aan gadaal ka sheegi doono. Waxay sidoo kale bixisaa faa iidada dheeriga ah ee ka hortagga dhaawaca unugyada oo si toos ah uga yimaada qaadashada aalkolada. Intaas waxaa sii dheer, CBD waxay leedahay saameyn bogsiineed oo jirka ah maxaa yeelay waxay leedahay saameyn anti-bararka, halka khamrigu uu waxyeelo u geysan karo caabuqa jirka. Waan ognahay in caabuqu uu sababo cudurada badankood sidaa darteed hadii aan maareyn karno waxaan kaa caawin karnaa kahortaga dhowr dhibaatooyin caafimaad oo kale oo ay ka mid yihiin wadno xanuun, sokorow, arthritis iyo waxyaabo kale oo badan.
2. Aalkolada iyo saliida CBD waxay yareeyaan welwelka bulshada
Sababta kale ee inteenna ugu badan ayaan ugu jeesanaa khamriga xafladaha waa qaab lagula tacaalo walaaca bulshada. Tan waxaa kale oo ka mid ah jahwareerka ka yimaada la macaamilka dadka aan sifiican u aqoonin, sida asxaabtaas aan kala sooca lahayn ama qaraabada fog. Dhibaatada kaliya ee khamriga halkan waa in mararka qaar aan ku raaxeysan karno isku dayga inaan fududeyno raaxo-darrada bulshada aad u badan, tanina waxay ku noqon kartaa dib-u-dhac marka aan isku ceebeyno nafteena.
Warka wanaagsan ee halkan ku jira ayaa ah in saliida CBD ay runti wax ka tareyso yaree welwelka bulshada, sida khamriga, iyo xitaa hadalka dadweynaha. Waxay tan ku samaysaa iyada oo la beddelo sida maskaxdu uga jawaabto walaaca waxayna u beddeleysaa socodka dhiigga meelaha qaarkood ee maskaxda. Tan waxaa ka mid ah noocyada kale ee xanuunnada welwelka, sida cilladda argagaxa, jahwareerka guud ee walwalka, iyo jahwareerka walaaca ka dib. Warka xitaa ka sii fiican ayaa ah in saliida CBD ay tan sameyn karto iyada oo aan suurtagal ahayn in lumiyo sidaad khamriga u cabbi karto, taas oo aan hoosta ka wada hadli doono.
3. Saliida CBD waxay kaa caawin kartaa inaad ka hortagto kororka miisaanka
Waxa ugu dambeeya ee aan u baahanahay inta lagu jiro fasaxyada iyo fasaxyada ayaa ah kalooriyo badan oo madhan taas oo keeni doonta kororka culeyska culeyska ee laga baqo. Waxaa jira duufaanno fara badan oo ah qaab daaweyn duban oo xafiiska dhexdiisa ah xilligan oo kale sanadka. Waan ognahay in khamrigu caan ku yahay inuu lahaado kalooriyaal badan oo runtii anaga anfacayn, halka uusan na siinin nafaqooyin muhiim ah. Waxay xitaa kicin kartaa rabitaankeena adoo khalkhal galinaya heerarkeena sonkorta dhiiga sidaa darteed waxaan ku dhameyneynaa wax ka badan inta aan runtii u baahanahay oo aan ku rarano rodol dheeri ah
Saliida CBD waxay kaa caawin kartaa inaad ka hortagto korodhka miisaanka (afb)
Taasi waxay tiri, saliida CBD dhab ahaantii waxay leedahay saameyn lid ku ah adoo xakameynaya rabitaankayaga iyo yareynta hamiga cuntada. Tani waxay ku sameysaa iyada oo xakameysa sonkorta dhiiga iyo isku dheelitirka hormoonadayada. Gaar ahaan, saliida CBD waxay wax ka qabataa hormoonada leptin iyo ghrelin ee mas'uulka ka ah calaamadaha gaajadeenna waxayna noo sheegaan goorta aan gaajoonayno ama aan dhereg nahay si aan u joojino cunista waqtiga saxda ah. Intaa waxaa sii dheer, saliida CBD waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta hormoonnada insulin iyo glucagon ee ka hortaga dhiiga sonkorta dhiigga, sidaa darteed waan iska ilaalin karnaa inaan gaarno kalooriyada madhan.
4. Saliida CBD kuuma siineyso wax hangool ah
Dhibaatada ugu weyn ee khamriga oo aan u maleyneyno inaan aad u naqaano waa hunguriga xun. Nasiib darrose, da'da weyn ee aan helno, way ka sii adkaan kartaa wax ka qabashada hunguriga oo run ahaantii ma jirto hab la caddeeyay oo looga hortegi karo. Marar badan isku darka sonkorta iyo aalkoladu waa duufaanka ugu fiican ee naga dhigaya inaan dareemo wadar burburay oo naga dhigaya inaan gebi ahaanba waxtar lahayn maalinta xigta ka dib habeen dambe.
Nasiib wanaagse, saliida CBD ma lahan wax hangovers ah waxayna xitaa kaa caawin kartaa inaad ka gudubto. Xitaa xitaa kama badin kartid saliida CBD, xitaa haddii aad qaadato wax ka badan inta aad u baahan tahay, ma la kulmi doontid waxyeellooyin kale oo aan ka ahayn inaad xoogaa dabacsan ka raaxaysato oo aad ka raaxaysato sidii caadiga ahayd. Arrin xiiso leh, saliidda CBD waxay kaloo kaa caawin kartaa inaad la dagaallanto hunguriga xun iyadoo kaa caawineysa inaad wax ka qabato qaar ka mid ah astaamahaas aan fiicneyn sida walwalka, lallabbada, madax xanuun iyo jir xanuun. Waxay sidoo kale wanaajin kartaa awoodaada maskaxda waxayna kugu ridi kartaa jawi wanaagsan, iyadoo ku siinaysa khibrad aad u fudud oo hangover ah. Ugu dambeyntiina, xitaa way shaqeyn kartaa si loo yareeyo heerarka aalkolada dhiigga oo ay weheliso balwadda iyo ka-noqoshada.
Ilaha waxaa ka mid ah CannabisTutor (EN), Icaria (EN), Madax banaan (EN)
khamrigaCBDsaliid cbdmiisaan lumiscaafimaad lehcaafimaadka
5 isbeddello leh tirakoob ku saabsan saliidda CBD eeyaha
(xayeysiin) Saliida CBD ee bini'aadamka waxay ahayd dhammaan xanaaqa sanadihii la soo dhaafay. Tani maahan wax lala yaabo ...
CBD iyo neefta: faa iidooyinka 4ta ugu sareysa bukaanada
Markii ay soo if baxeen daaweyn kale, daawooyinka loo qoro waxay la kulmeen hoos u dhac weyn xagga iibka ...
Maareeyaha fadhigiisu yahay London ayaa raba inuu aasaaso sanduuqa xashiishadda ee ugu weyn Yurub
Suuqa yar ee maalgashiga xashiishadda ee Yurub ayaa muujinaya astaamo nololeed, iyada oo ...
Warshadda gaaska ku saleysan ee hemp: Shirkadda tamarta ee Faransiiska ayaa maalgelinaysa ku dhowaad 19 milyan oo gini
3 Dariiqo oo aad ugu Deganaan Karto CBD Inta Faafida COVID-19
FDA waxay kordhisaa xakameynta alaabada CBD